जनताको काम कहिले गर्ने?
रामबाबु सुवेदी आइतबार, असोज २५, २०७७, १२:२३
देशको बेथिति र वर्तमान अवस्था हेर्दा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएर हामीले के पायौं र भन्ने लाग्छ। यी सबै एउटै कुवाका भ्यागुता हुन्। गरिब र शोषित वर्गको आवाज बनी आएको प्रचण्ड अहिले आफैं सामन्ती र शासक बनेर बसेका छन्। सर्वहाराका नेता मानिने ओली आफ्नै आफन्त र कुर्सीको प्रलोभनमा परेका छन्। यस्ताबाट के आशा गर्न सकिन्छ र देशले काचुली फेरोस्?
मलाई त लाग्छ, निमुखा जनताको सासलाई सिँढी बनाएर कुबेरको खजानामा पुग्न उनीहरुले यतिका प्रपञ्च रचे, माध्यम खोजेर आफू सोझै शिखरमा पुगे। यस्ता व्यक्तिलाई जनताको हकहित र दायित्वबोध के हुन सक्थ्यो? यी त पिपासु हुन्, पैसा र बिलासिताका भोगी हुन्। यिनीहरुलाई जीवनमा आफ्नो र आफ्ना परिवार अनि तिनका सहयोगी बाहेक अन्यको केही ख्याल छैन।
यस्ता अराजक मानसिकता भएका व्यक्ति, चाहे प्रचण्ड होउन् वा ओली वा देउवा, एउटा सादगी डाक्टर ४ हप्तासम्म सत्याग्रहमा रहँदा पनि सहानुभूति देखाउँदैनन्। सत्याग्रहीप्रति न्याय, सहानुभूति, गम्भीरता एवं जिम्मेवारबोध गरेको भए अनसन यति लम्बिँदैनथ्यो। उनीहरुले त डा केसी मरे पनि के फरक पर्ला र भन्ने शैली देखाए। धन्न यो देशका असल नागरिकहरु उनको पक्षमा उभिए र सरकार डा केसीसँग वार्ता र सहमति गर्न तयार भयो। उनको अनसन २८औं दिनमा टुंगियो।
नेताहरुसँग नोक्सानको खाता हुँदैन, हुन्छ त केवल नाफाको मात्र। त्यस्ता पैसाप्रेमीहरुसँग अरु के नै आशा गर्न सकिन्छ र? सत्तामा हुँदा हल न चल हुने र प्रतिपक्षमा बस्दा उथलपुथल गरौंलाझैं शैली छ, सबैको। अनि देशले के विकासको गति लिनु? आफैंमा मात्र केन्द्रित मोनोपोली राजनितिले आम नागरिकको माग भने कहिल्यै सम्बोधन हुन नसक्ने स्थिति छ।
वर्तमान अवस्थामा ओली सक्रिय भूमिकामा रहे पनि उनले आफ्नो बासस्थान मात्र मजबुत बनाएका छन्। झापामा रहेको दमक शहरमा अरबौंको प्रोजेक्ट पारेका छन्। देशको उन्नती र प्रगतिमा नलागेर आफ्नो शहरी विकासमा मात्र तत्पर हुनुले उनलाई देशकै प्रधानमन्त्री होइन, शहरिया प्रधानमन्त्री भन्न सकिने छ।
अहिले सत्तामा रहेका बेला उनले गतिला केही ठूला काम गर्न सक्थे तर उनी गैरजिम्मेवार शैली देखाइरहेका छन्। जसले धेरैको मनमा आघात पुगेको छ। कैयौं बलात्कारीले सजाय पाएका छैनन्। एनसेलदेखि वाइडबडीसम्मका अनेक काण्डहरुको छिनोफानो भएको छैन। ठूला काण्डमा प्रधानमन्त्री निकटकै मान्छे जोडिएका छन्। यसले देशमा न्याय पाइन्छ, अपराधीले सजाय पाउँछन्, भ्रष्टाचारी दण्डित हुन्छन् भन्ने आशा पनि हराउँदै गएका छन्।
लैंगिक हिंसा, जातीय भेदभाव एवं पितृसत्तात्मक सोच राखेर धेरैमाथि अपराध गरिएको छ। कमजोर अर्थतन्त्र, कछुवा गतिको विकास, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिता अहिलेको प्रमुख मुद्दा भइरहेको समयमा ती विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले पनि सरकारको प्रभावकारिता र कार्यक्षमताप्रति प्रश्न खडा भएको छ।
अहिले महामारी फैलिरहँदा र दिनहुँ संक्रमण बढिरहँदा सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह नगरेको र जनभावनामा ठेस पुर्‍याएको प्रष्ट पाइन्छ। गतिलो स्वास्थ संरचना, मेडिकल शिक्षाको विकास, अस्पताल निर्माण, भेन्टिलेटर निर्माण वा आयात, कोरोना रोकथामका क्रियाकलापलाई तीव्रता दिनुको सट्टा झन् जनतामाथि त्रास छर्दै 'सास फेर्न गाह्रो भए वा बेहोस भए मात्र अस्पताल आउनू' भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति सरकारको तर्फबाट दिइएको छ। यसले हामी कति निर्लज्ज सरकारबाट शासित रहेछौं भन्ने महसुस हुन्छ। त्यसमाथि मेडिकल माफियाको बिगबिगी त छँदैछ।
राजतन्त्र फ्यालेर लोकतन्त्र ल्याएको के यस्तै शासन शैली हेर्नलाई थियो? एउटा राजा फालेर यहाँ कैयौं राजा उदाए, जसले देशलाई झन्‌झन् खाल्डोतिर हालिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि कुनै किसिमको विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न। अर्को माओवादी र अर्को प्रचण्डको जन्म नहोला भन्न सकिन्न। भयो भने फेरि देशको बर्बादी त हुन्छ।
त्यसैले ती दिनहरु ननिम्त्याउन र जनभावना कदर गर्दै अहिलेको मुद्दालाई सम्बोधन होस्। असन्तुष्टि सम्बोधन होस्। शासन सञ्चालनका कमजोरी सुधार होस्। सरकार उत्तरदायी बनोस् र दायित्वबोध गरोस्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्यादा कायम होस्। पक्ष प्रतिपक्षमा भन्दा पनि जायज मुद्दाको विचार गरियोस्, भेदभाव नरहोस्। 'आफ्नालाई काँख र अर्कालाई पाखा' भनेझैं उक्ति सरकारले गर्नु भएन।
नेपाली सबै समान हुन। त्यसैले जो सरकार वा सत्तामा हुन्छ उनीहरुले जनहित र जनभावनाको कदर गर्दै स्फटिक न्याय गर्न सकोस्। ताकि, त्यस्तै घटनाहरु नदोहोरिउन्। सरकार कानमा तेल हालेर नबसोस्। न्याय सबैलाई एउटै हो, सुनुवाइ ढिलो छिटो हुन सक्ला तर जनता माग सम्बोधन गर्दै हृदय ठूलो पारी आफ्नो अवधि सफल गरियोस्। फेरि निर्मला पन्तकी आमाले रुन नपरोस्, गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्न नपरोस् र विगत दोहोर्‍याउने घटनाक्रम नहोस्।
त्यसैले पूर्वाग्रह नराखी भन्नुस् त सत्तामा रहँदा केही काम नगरे कहिले गर्ने त?
व्यंग्य : युवराज खतिवडाका भगवान